Izinwele ezomile nezinempilo, lapho isimo sezulu sesomile, ungahlala uzwa umsindo we- “papapa” o-tuli, omubi, ongathandeki futhi ongathandeki.
Izinwele ezibushelelezi zizokujabulisa, ngasikhathi sinye, kuzoba nemood eyengeziwe yokujabulela okwamanje.
Noma kunjalo, usebenzise iningi lama-conditioners nezinamaski wezinwele, kepha umphumela namanje awukakulindelwa. Wake wacabanga ngokuzama izindlela ezintsha zokunakekela izinwele?
Ukunakekelwa Kwezinwele IBlack TECH
I-DoZRAN - Amafutha Abalulekile Oondlayo
Izinwele zokunakekela izinwele ezinamafutha amaningi ayigugu
Ukunakekelwa kokudla okunezinwele okwenziwa ekhaya akusebenzi kangako kune- “package package” yezitolo ze-barber efanelekile, elula futhi enempilo.
Uyazi ukuthi ngaphezu kobuso, ukunakekelwa kwesikhumba somzimba, kanye ne-aromatherapy, uwoyela obalulekile nawo ungasetshenziselwa ukunakekelwa kwezinwele, okunondla izinwele zezinwele nezinwele ngokuphelele, ukuze izinwele zibushelelezi futhi zizinhle, zondle isikhumba, futhi ziqinise izimpande zezinwele.
Ochwepheshe bezokwelapha bathanda njalo futhi bahle ukuxazulula izinkinga ngamafutha abalulekile, ngoba bakhetha izinto zemvelo, ezinempilo nezinhle. Ngokuphathelene nezinwele, bathi: Impela, ingaxazululwa ngamafutha abalulekile!
Izinkinga zokudla okunempilo ziyinkinga eyinhloko yezinwele ezomile
Izinwele ezomile kulula ukusonga, okusho ukuthi impilo yezinwele isongelwe, futhi iningi lezizathu zibangelwa ukungondleki okwanele, okuholela ekulahlekelweni kwamanzi, amaprotheni kanye nezinto ezahlukahlukene zokulandela umkhondo, okwenza izinwele zonakaliswe nekhwalithi yezinwele lonakele.
Ukunakekelwa okungafanele futhi kungenye yezimbangela zezinwele ezomile. Ukugeza njalo futhi ukudaya okuvunyelwe njalo kungadala futhi ukulimala kwezinwele, okwenza izinwele zibe buthuntu futhi zomile.
Ingcindezi yomsebenzi ngokweqile, ikakhulukazi kulabo Sekuyisikhathi eside besebenzisa amakhompyutha, unake kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, ubuchopho bayohlala bujabule.
Njengomphumela, uhlelo lwe-endocrine oluhambisana nokukhula kwezinwele luyathinteka, okuholela ekuqhekekeni ngokweqile kwe-sebaceous gland secretion, blocking follicles izinwele, futhi ukwenza izinwele zomile futhi zomile.
I-DoZRAN - Amafutha Abalulekile Oondlayo, ohlanganiswe nezinhlobonhlobo zamafutha abalulekile ayigugu, angondla kahle izinwele nezinwele zakho futhi asize izinwele zivuse ukukhanya, ukuthokomala, ukugcwala kanye nokuqina.
Izithako ze-oyili ezibalulekile ukwengeza ngokuphelele izakhi ezidingekayo ezinwele
Izinto ezithile ezisesimweni sendabuko kulula ukuzihlalela esikhumbeni, okwenza izingcezu zezinwele zivaleke, okwenza izinhlayiya ezinamafutha nezinwele ziphume.
Ama-conditioners amaningi anesifo esibuthakathaka, futhi akunakugwenywa ukuthi bathinte isikhumba ngesikhathi sokusebenzisa, esizodala umonakalo isikhathi eside.
I-DoZRAN - Amafutha Abalulekile Oondlayo, ayiqukethe uwoyela we-silicone, umongo nezinye izithako. Kususelwa emafutheni ayigugu emvelo futhi asetshenziswa ngqo ezinweleni. Ingakha ungqimba oluvikelayo lwamafutha abalulekile, ngenkathi iphinda iphakamise ukondliwa kwezinwele, iphinda ibuyise nezinwele ezilimele.
Amamolekyuli abalulekile amakha angakhuthaza ukujikeleza komzimba womuntu, anciphise isimo sengqondo sokuphumula, futhi alondoloze impilo nomzimba nengqondo.
Uyini imfihlo ye-DOZRAN - Amafutha Abondlayo Abalulekile?
// kuresiphi //
Uma kuqhathaniswa namakhemikhali aqukethe ama-standard conditioners, ama-aromatherapy abelaphi ngokwemvelo bakhetha ukusebenzisa uwoyela obalulekile futhi wemvelo ukufeza inhloso yesimo sezinwele. Ukukhethwa kwefomula ebalulekile yamafutha ngokwemvelo kuyinto ebaluleke kakhulu.
Ukuze kufezekiswe umphumela ofunekayo engqondweni, iqembu labelaphi abangama-aroma lahlola kaninginingi futhi laguqula ifomula, futhi ekugcineni yanquma ukusebenzisa uwoyela wembewu yamagilebhisi kanye namafutha kakhukhunathi njengamafutha ayisisekelo wokudla. Ngamafutha ezimpande ze-ginger, uwoyela weqabunga le-rosemary, uwoyela we-ylang-ylang njengamafutha omphumela. Ukubhekana nokuoma kwezinwele, i-frizz, okulula ukuwa nezinye izingqinamba, yenza ukwelashwa okuqondisiwe.
Amafutha embewu yamagilebhisi kawoyela kakhukhunathi inganikeza izakhi ezidingekayo ezinweleni, futhi uwoyela weqabunga le-rosemary ikwazi ukufaka amanzi ngenwele futhi yenze izinwele zithambe futhi zibushelelezi.
Amafutha wejinja ingalungisa izinwele ezomile nezihlukanisayo, futhi Amafutha weYlang Ylang kungenza izinwele zibe mnyama futhi zihle.
Amafutha abalulekile nawo anga Philisa umzimba nengqondo ngenkathi uvikela izinwele. Ama-molecule ehlukile anephunga angangena emzimbeni ngomqondo wokuhogela nesikhumba, okuthi kunciphisa ukukhathala futhi yehlisa umoya. Yondla, usuka ngaphandle uye ngaphakathi.
Uma uphikelela ekuyisebenziseni isikhathi esithile, ukoma kwezinwele, iziqhekeko ezihlukanisayo, ne-frizz okubangelwa ukuvumela nokudaya ingalungiswa kuze kufike ezingeni elithile.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kungenza izinwele ziqine, zithambe futhi zicwebezeke, futhi zikhiphe iphunga lobuhle bemvelo.
Umuzwa omusha wokunakekelwa kwezinwele, ukulungele ukuzama?